Ukwelashwa kokuqonda ku-aphasia - Ukuqeqeshwa Kokuqonda
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » aphasia » Ukwelashwa kokuqonda ku-aphasia
Lesi sihloko simbozwe esifundweni sevidiyo esithi "The treatment of aphasia" esingathengwa lapha ngama- € 65.
Ngokuvamile, kunezindlela ezimbili ezinkulu zokwelashwa kokuqonda ku-i-aphasia:
Ukwelashwa okusekelwe unomusa we-aphasia
Ukwelashwa okusekelwe izinga lokukhubazeka
Ngokuqondene nohlobo lokuqala lokwelashwa, siyazi ukuthi kunezivumelwano ezithile. Isibonelo, maqondana ne-aphasia yomhlaba, uMarshall (1986) wenza uchungechunge lwezigaba ezine ukuthola impendulo eyanele:
Cela noma iyiphi impendulo (ngisho nengakhulumi ngamazwi)
Khuthaza impendulo ehlukanisiwe
Cela impendulo efanele
Cela impendulo enembile
Kepha I-aphasia kaWernicke, kunezivumelwano ezithile ezifana ne-TWA (Helm-Estabrooks nozakwabo). Ngokuvamile, ukwelashwa kwama-aphasias asemuva, anezinga eliphakeme lokukhubazeka, kusekelwe ekwamukelweni kwesikhuthazo somlomo, ekuqondeni amagama angawodwa, ekwehliseni ukubekezela nasekuziqapheleni.
Uma kwenzeka kubaI-aphasia kaBrocangakolunye uhlangothi, ukwelashwa kokuqonda kuvame ukuthatha isihlalo sangemuva. Kodwa-ke, njalo kuyadingeka ukuphenya amakhono okuqonda ngemibuzo, ngokwesibonelo, imisho engeyona eyokuhlunga futhi evuselelekayo.
Ukwelashwa okususelwa ezingeni kuzama ukwehlukanisa ukuqonda kuzinto zako (kusuka kokufakwa kokuzwa kuya ekuqondeni inkulumo) ukuphenya izinga lokukhubazeka. Eminye imisebenzi, kuya ngezinga elibandakanyekayo, kungaba:
Ukubandlululwa kwamaqoqo namagama
I-Phoneme-grapheme, i-word-image, i-word-word, i-image-image exhunywe ngokomfanekiso, inhlangano yokuchaza amagama
Ukwelashwa okumsulwa kwe-semantic (ngokwesibonelo, i- Ukuhlaziywa kwesici seSemantic)
Yebo / cha imibuzo kanye nabaphazamisi.
Akunandaba ngecala elithile, kubalulekile ukukhumbula ukuthi:
Ukuqonda ukuphazamiseka kuzibonakalisa ngokushesha esigabeni esibucayi futhi ezimweni eziningi kuvame ukwehla ngokuzenzekelayo, noma kakhulu, ezinyangeni zokuqala
Kuvame ukuhlotshaniswa ne-anosognosia (ukungazi kwesifo)
Ingahlotshaniswa ne- izinkinga zokunaka
Ungakhetha ukusebenza ngokuya ngohlobo lwe-aphasia noma izinga lokukhubazeka
Kukhona amagama amabili angukhiye: ukuphindaphinda nokuziqapha ngokwakho
i-aphasia, ukuqonda i-aphasia, okufanele ukwenze ukuqonda i-aphasia, ukuqonda ukuvuselelwa kwe-aphasia, ukwelashwa kwe-aphasia
Ukwelashwa kokuqonda ku-aphasia2020-12-112020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/head-2428333_1280.png200px200px
Ukuvuselelwa kwe-aphasia: i-asynchronous online courseaphasia